မကြာခင် ဖူဂျီတောင်ပေါက်ကွဲတော့မှာလား။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာမလဲ? - JAPO Japanese News
ကြာ 30 Sep 2021, 16:38 ညနေ
၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဖူဂျီတောင်က ပေါက်ကွဲမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ကာတွန်းက သတင်းကြီးတစ်ခုမဖြစ်ခင် JAPO မှာ လည်း ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက် မှန်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမယ့် မပေါက်ကွဲခဲ့လို့ တော်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖူဂျီတောင်ဟာ မကြာခင်ပေါက်ကွဲတော့မယ်ဆိုကတော့ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ ငလျင်ပညာရှင်တွေကတော့ ဖူဂျီတောင်ဟာ သေချာပေါက် ပေါက်ကွဲမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်အချိန်ပေါက်ကွဲမလဲဆိုတာသာ မသိကြောင်း ဆိုကြပါတယ်။
ဖူဂျီတောင်ကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး စောင့်ကြည့်နေပေမယ့် ပေါက်ကွဲလာရင် ဘယ်လောက်သက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာ မမျှော်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါဆို အရင်က ဖူဂျီတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
ဖူဂျီတောင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်က ပေါက်ကွဲဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဆာမူရိုင်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ ခေတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်နှစ်ပေါင်း ၅၆၀၀ အတွင်းမှာ ဖူဂျီတောင်ဟာ အကြိမ်ပေါင်း ၁၈၀ ခန့် ပေါက်ကွဲဖူးတယ်လို့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရသိရတဲ့အတွက် ပျမ်းမျှ ၃၁ နှစ်မှာ တစ်ကြိမ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုတလောမှာ မပေါက်ကွဲတာအချိန်အတော်ကြာနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်က ဖူဂျီတောင် ပေါက်ကွဲမှုဟာ အပေါ်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘေးဘက်ကနေ ပေါက်ကွဲထွက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
မှတ်တမ်းတွေအရ ပျက်စီးမှုဟာ ဖူဂျီတောင်ကနေ ၁၀ ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ရွာက နေအိမ် ၃၇ လုံး ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျန်ရှိတဲ့အိမ်ခြေ ၃၉ လုံးကလည်း ကျလာတဲ့မီးတောင်ပြာအလေးချိန်ကြောင့် ပြိုကျခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။ မီးတောင်ပြာဟာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အကွာအဝေးထိအောင် ပျံ့နှံ့ကာ စင်တီမီတာများစွာအထိ စုပုံနေပြီး ကောက်ပဲသီးနှံလည်း မရိတ်သိမ်းနိုင်ဘဲ ချောင်းဆိုးဝေဒနာဖြစ်ပွားသူတွေလည်း တိုးပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ ဖူဂျီတောင်အောက်မှာ ပုံနေတဲ့ မီးတောင်ချော်ခဲတွေဟာ ပေါက်ကွဲစဥ်တုန်းက ၂ ဆ ခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲတဲ့အရှိန်ကတော့ မသေးလှပါဘူး။
တကယ်တော့ ဖူဂျီတောင်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ အတွင်း အပေါ်ဘက်ကနေ မပေါက်ကွဲဖူးပါဘူး။ ဖူဂျီတောင်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းကနေ ချော်ရည်တွေ ပေါက်ထွက်လာမလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ အခုအချိန်ထိတော့ မီးတောင်ဝ ၄၄ နေရာရှိကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးပေမယ့် သုတေသနလုပ်လေလေ နေရာတွေ တိုးလာလေလေဖြစ်မလားလည်း မသိနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်နေရာကနေ ပေါက်ကွဲလာမယ်မသိတာကလည်း ကြောက်စရာပါပဲ။
အရာအားလုံးကို လောင်ကျွမ်းစေတဲ့ ချော်ရည်ဟာ ခနဂဝစီရင်စုအထိနဲ့ မီးတောင်ပြာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လယ်ယာပစ္စည်းပျက်စီးမှုဟာ ခန်းတိုးဒေသမှာရှိတဲ့စီရင်စုအားလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
မီးတောင်နဲ့နီးတဲ့မြို့တွေမှာတော့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအရှိန်ကြောင့် ပြတင်းပေါက်မှန်တွေ ပျက်စီးပြီး မီးတောင်ပြာနဲ့အတူ ပါလာတဲ့ ကျောက်ခဲတွေလည်း လွင့်စင်လာနိုင်ပါတယ်။ကြီးမားစွာပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ချော်ရည်တွေ စီးကျလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးကလည်း ရှိပြန်ပါတယ်။
စီးပွားရေးပျက်စီးမှုဟာလည်း ယန်း ၂,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေတကယ်ပဲဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်သလားဆိုရင် ငလျင်အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အွန်းတခဲဖြစ်စဥ်မှာဆိုရင် ငလျင်လှုပ်ပြီး ၁၁ မိနစ်အတွင်းမှာ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပြေးမယ့်အချိန်ကိုမရပါဘူး။
ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ရင်တောင် ဒုတိယဘေးအန္တရာယ်လည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ မြစ်ကမ်းပါးမှာ မီးတောင်ပြာတွေ စုပုံပြီး တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမိုးကြေောင့် ပြင်းထန်တဲ့ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဥ်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ က မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဥ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒီပျက်စီးမှုဟာ ရှည်လျားပြီး မီးတောင်ပြာတွေပါဝင်တဲ့ ရွံ့စီးကြောင်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကနေ ၇၀ အထိ ဆက်တိုက်စီးဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မီးတောင်ပြာတွေဟာ တစ်လကျော်ကြာ ထပ်မံကျဆင်းလာပြီး သေးငယ်တဲ့အမှုန့်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PC စတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ပျက်စီးစေပြန်ပါတယ်။လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ရေပိုက်လိုင်းတွေအားလုံး ရပ်တန့်သွားနိုင်ခြေလည်း မြင့်မားပါတယ်။
လှပတဲ့ဖူဂျီတောင်ဟာ တကယ်တော့ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဂျပန်မှာ နေဗီရောင် ကျည်ဆန်ရထားလိုင်း ပြုလုပ်ထားတာ သိပါသလား?
တိုကျိုနဲ့ အိုဆာကာကို ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ကျည်ဆန်ရထားလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်း ဖူဂျီတောင်သာ ပေါက်ကွဲသွားလို့ရှိရင် အချိန်အတန်ကြာအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားကြတဲ့အတွက် ကျည်ဆန်ရထားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်း အလောတကြီးလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ ပြောကြသူလည်း ရှိပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ကြီးကြောင့် ဖူဂျီတောင်ဟာ ပေါက်ကွဲဖို့သိပ်မလိုတော့ဘူးပြောလာတာ ၁၀ နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်လို့ ပေါက်ကွဲခဲ့ရင်လည်း ပေါက်ကွဲမှုသေးသေးနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးသွားဖို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။